Accueil » Chronique » Ranavalona imason’ny Tantara
Aiza Antsahatsiroa, aiza no Antsahatsiroa? Tahaka ny anaran-tany maro eto amintsika dia mety hahafanina rehefa tsy hay marina hatraiza no tsy Andohalo intsony, fa efa Ambohimanoro, na dia mbola tsy Anjohy. Ny Ntaolo no nahay nanavaka tsara: eto no Ambohitantely, etsy Ambato­- bevanja, eroa Fidirana. Toa samy eo Andafiavaratra eo ihany fa aiza marina no Ambohijafy, aiza no Ampamaho, mbola ao ve ny fasan’ Andriampirokana?
Raha Antsahatsiroa very anarana ho «Ambonin’Ampamarinana» aloha, mety tsy dia hahagaga loatra. Natao tsara laza mantsy ireo Kristianina navarina teo Tsimihatsaka ka nahavery anarana ny toerana ho Ampamarinana. Mainka nananganan’i James Sibree sy ny LMS (London Missionary Society) io Fiangonana Tranovato fahatsiarovana, notokanana tamin’ny 28 marsa 1874, io.
Ny 28 marsa 1849, no navarina an-kady teo hikodia hatrany Mahamasina ireo Kristianina izay nomelohin-dRanavalomanjaka ho mivadika amin’ny fivavahan-drazana sady fivavaham-panjakana. Ny soratra rehetra mitantara ny nanjakan-dRanavalona Reniny dia tsy mahalala afa-tsy io fanenjehana ny Kristianina io. Mainka moa fa noroahindRanavalona tsy honina teto Madagasikara avokoa ireo Vazaha satria noheveriny fa manakorontana ny saim-bahoaka na miketrika fikomiana. Tsy tantin’ireo sy ny mpianany (ohatra Pastora Rabary) mihitsy izany, anefa ireny Vazaha ireny (ny Misionera, ny naman’i Jean Laborde, ry Ida Pfeiffer, ny mpanao «romans» peta-toko) no nanoratra ny boky niely ary mbola namakiana ny Tantara taty aoriana.
Tsy nisy Mpanjaka voahoso-potaka mihoatra noho Ranavalona. «Caligula femelle» hono, «Néron malgache» hono satria «lian-drà». Fa firy tapitrisa no maty tamin’ny «Révolution française» na nandritra ny «guerres napoléoniennes» (1799-1814)? Firy no voafira sofina tao Bressuire (24 aogositra 1792), an’alina firy ny zaza amam-behivavy natsatsika tamin’ny «massacres de septembre» (1792), firifiry no tapadoha nandritra ny «Terreur» (5 septembra 1793 – 28 jolay 1794) ? Ary ny habibiana vitan’ny «colonnes infernales» tany Vendée (janoary hatramin’ny mey 1794)?
Na teto Madagasikara na tany Andafy, ny hevitra sy ny fomba ankehitriny tsy hevitra no sady tsy fomba tamin’ny andron-dRanavalona (1828-1861). Hevi-baovao tena nanampoka ary tsy vita dinika izany fivavahana kristiana izany raha notoriana teto tamin’ny andron-dRadama. Io naneken-dRadama ny Vazaha hitondra fahaiza-manao sady hampiditra fivavahana hafa teto Imerina io no nahatsara laza azy tany anatin’ireo boky nosoratan’ireny Vazaha ireny.
Raha nifanandrina tamin’ny Frantsay tany Toamasina Rainandriamam­- pandry (1883-1885) dia nahazo anarana hoe «Ratiatanindrazana». Ireo rehetra niady ho an’ny fahaleovantena, Menalamba, VVS, MDRM, nahazo anarana fa tia tanindrazana. Tahotra ny fihaodihaodian’ny tafika frantsay sy britanika taty amin’ny Ranomasimbe indiana ary ny efa fiakaran’ireo an-tanety ombieny ombieny no naha be ahiahy an-dRanavalona.
Ny Kolontsaina no tena fanahin’ny firenena iray. Ary mandrafitra indrindra ny Kolontsaina ny Teny: tamin’ny andron-dRanavalona no nanangonana ny hainteny sy ny voambolana ntaolo izay nahiany ho very rehefa «diovin’ny Misionera» sao tsy maotina. Mingoso…
«Nampively rano sy nampisotro vokaka ary nampilefona omby teo Andranomalahelo, farihy ambodin’Antsahatsiroa, Andrianampoinimerina» (Tantara Ny Andriana, takila 818-819). Raha hamerina hasina an’Antsahatsiroa, ka hitsetsetra ny fahiny, hamelovelo ny Tantara, aoka tsy ho jamban’ny alahelo ireo Martioran’Ampamarinana ny maso hitopy amin-dRanavalona. Ny nitaizana azy tamin’ny fahendren’ny Ntaolo no nentiny nisedra zavabaovao tanteraka tsy niantraika tamin’Andriamasinanavalona na Andrianampoinimerina. Ankamantatra rahateo izay mety ho natao na tsy ho nataon’izy mianaka iretsy.
Ranavalona, velona nomem-pondro, niamboho narahina ozona. Faran’ny teny mety ho boky, faran’ny hafatrafatra tsy maintsy Tantara: hafatrafaro anaty bokin-Tantara ny taranaka hanala ozona an’Imavo, Rabodonandrianampoinimerina, Ranavalona.